8 Stage 12V 20a Automatic lithium LiFePO4 Battery chaja factory na suppliers | Ligao
MBC 7-ogbo Battery chaja
MEC 8-ogbo Battery chaja
MFC 8-ogbo Battery chaja
LBC 8-ogbo Lithium & LiFePO4 chaja
Inverter na Battery chaja
DC DC Ntụgharị
Automatic voltaji stabilizer
Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Type
Solar n'Aka njikwa
8 Stage 12V 20a Automatic lithium LiFePO4 Battery chaja
Nkebi NO: LBC 1220
• Switchmode technology: Ee
• polarity nchedo: Ee
• mmepụta obere nchedo: Ee
• Non batrị njikọ nchedo: Ee
• N'ime voltaji nchedo: Ee
• N'ime okpomọkụ nchedo: Ee
• Kwụpụ nchedo: Ee
• Jụrụ ofufe: Automatic okpomọkụ na-achịkwa.
• Input voltaji: 220-240V AC, 50 / 60Hz / 110V AC, 50 / 60Hz.
• Input ike: 554W
• gosiri mmepụta: 12V DC, 20a
• Back igbapu: 4mA
• Opekempe mmalite voltaji: 1.0V
• The 8 nkebi bụ: Soft Malite, Bulk, Absorption, Tụlee, Mmecha, Maximization, ise n'elu ma na-enwe.
• Battery nso: 40-200Ah
• Ụdị batrị: 12V Lithium-ion LiFePO4 batrị
• Kwes chebe (na-akwado na): 65 ℃ +/- 5 ℃.
• arụmọrụ: App. 85%.
• Dabara ụkpụrụ: CB, OA, IEC60335, EN61000, EN55014
• arọ: 1.28kg
Mmepụta Short Protection
N'ime voltaji Protection
N'ime okpomọkụ Protection
Nke a bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka lithium batrị chaja na 8 ụgwọ nkebi.
Automatic Nchaji echebe gị batrị site na ịbụ overcharged. N'ihi ya, i nwere ike ịhapụ chaja jikọọ na batrị mgbe ebighị ebi.
8-ogbo Nchaji bụ nnọọ mbara na ezi Nchaji usoro nke na-enye gị batrị ogologo ndụ na mma arụmọrụ tụnyere iji ọdịnala chaja.
8-ogbo chaja e mere maka lithium-ion batrị iji LiFePO4 technology naanị.
Step1. Soft Malite
A mbido ụgwọ Filiks na jiri nwayọọ ewebata ike batrị. Nke a na-echebe batrị na enwekwu ndụ batrị.
Nzọụkwụ 2. Bulk
Nchaji na Oke ugbu a ruo mgbe ihe dị ka 90% batrị ikike.
Nnukwu mode maka Nchaji okirikiri. Mmalite na-adọ na-aga n'ihu ruo mgbe batrị si ọnụ voltaji bilitere n'elu set ịgba, na nke na-ezo chaja switches ka nnukwu Nchaji.
Ọ bụrụ na ọnụ voltaji adịghị gafere voltaji ịgba n'ime oge ịgba, chaja switches ka nsogbu mode (Nzọụkwụ 2 oriọna siri ike) na discontinues Nchaji. Ọ bụrụ otú ahụ, na batrị-ezighị ma ọ bụ ya ike bụ oke buru ibu.
Nzọụkwụ 3 Absorption
Nchaji na adalata ugbu jirichaa ruo 95% batrị ikike.
Nzọụkwụ 4 Tụlee.
Nwaleenụ ọ bụrụ na batrị nwere ike jide ego. Batrị na-apụghị jide ụgwọ nwere ike mkpa ka a kụọ.
Nzọụkwụ 5 Mmecha
Final ụgwọ na ụba ugbu a.
Nzọụkwụ 6 Maximization
Final n'Aka na kacha voltaji ruo 100% batrị ikike.
Nzọụkwụ 7 ise n'elu
The ise n'elu ogbo ekwusi batrị na 100% batrị ụgwọ enweghị overcharging ma ọ bụ etisa batrị. Nke a pụtara na chaja nwere ike ekpe jikọọ na batrị mgbe ebighị ebi.
Nzọụkwụ 8 ịnọgide na-enwe
Ịnọgide na-enwe batrị na 95% -100% ikike. Chaja Monitors batrị voltaji na-enye a ịnọgide na-enwe mgbe ọ dị mkpa na-batrị n'ụzọ zuru ezu ebubo.
The 12 Akpaaka LITHIUM batrị chaja nwere 8 ruo nzọụkwụ n'ụzọ zuru ezu akpaka Nchaji okirikiri. Chaja na-akpaghị aka na-aga azụ ka mmalite nke Nchaji usoro.
N'agbanyeghị na size ma ọ bụ ụdị, na-ahapụ ya ka LBC-n'Aka. Power maka ọkachamara.
Packaging na mbupu
Otu afọ akwụkwọ ikike.
Magburu onwe Nga ahịa na Mgbe Ọ Malitesịrị-sales ọrụ usoro.
l Guzosie Ike, na 1986, a ọkachamara emeputa ọkachamara eletriki ngwa.
l afọ 30 ọkachamara Factory Manufacturer na Zhongshan, China
l Product iche: Power Invertor, Automantic voltaji regulator, Battery chaja, Ntụgharị na Solar Change njikwa.
l Certificate: ISO 9001-2015, GS asambodo, CB asambodo, wdg
Previous: 8 Stage 12V 20a Automatic lithium LiFePO4 Battery chaja
12 volt Battery chaja
12V 24v Automotive Battery chaja
12V 24v Battery chaja
12V Battery chaja
12V Car Battery chaja
24v Lithium Car Battery chaja
Auto Battery chaja
Automatic Battery chaja
Automatic Battery chaja N'ihi Car
Battery chaja N'ihi Car
Battery chaja N'ihi Generator
Battery chaja N'ihi Toy Car
Battery chaja na Dugara
Best Auto Battery chaja
Dizel Generator Battery chaja
Electric Bike Battery chaja 12.6v
Electric Car Battery chaja
Njem mmụta Boat Battery chaja
N'ihi Paslode Battery chaja
High Frequency Battery chaja
Housseboat Battery chaja
Duru Acid Battery chaja 12V
Lifepo4 Battery chaja
Motorcycle Battery chaja
Qc3.0 Car Battery chaja USB
Rechargeable Battery chaja
RoHS Battery chaja
Smart Car Battery chaja
Solar Battery chaja
Okwu: Tongle Industrial Park, No.38 Donghai West Road, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China